Ahoana ny famongorana ny rano: ny fahazarana, sakafo ary zavamaniry tsara indrindra | Nutri Diet
Fomba fanalana tsiranoka
Michael Serrano | | soso-kevitra
Tsy hainao ny manafoana ny rano? Ity olana ity dia mety hiteraka fivontosana amin'ny tananao, ny tongotrao, ny kitrokely, ny tongotrao ary ny kibonao..
Ho hitanao eto ny tsy hitovizany toro-hevitra sy tetika hamongorana ny tsy fahasalaman'ny anatiny sy ivelany ny fihazonana ny tsiranoka.
1 Fa maninona no mitazona ranon-javatra?
2 Ahoana ny fomba fanesorana ranoka voajanahary
2.1 mandrosoa hatrany
2.2 Misotroa rano bebe kokoa
2.3 Atsangano ny tongotrao
3 Ahoana ny famongorana ny rano amin'ny sakafo
3.1 Ahena ny sira
3.2 Makà magnesium bebe kokoa
3.3 Makà vitamina B6 bebe kokoa
3.4 Makà potasioma bebe kokoa
3.5 Halaviro ny gliosida voadio
4 Ahoana ny fomba fanesorana ranon-javamaniry
4.3 Voa voa
4.4 Fanazavana voajanahary bebe kokoa
Fa maninona no mitazona ranon-javatra?
Ny fihazonana ny tsiranoka dia mety hisy antony samihafa. Ny fitondrana vohoka sy ny fadimbolana dia mitazona rano ny vehivavy sasany. Ny olona tsy miasa ara-batana mandritra ny ora maro (ohatra any amin'ny birao, eo alohan'ny solosaina) dia mety voan'izany ihany koa.
Ny fihazonana ranoka mahery vaika dia mety vokatry ny aretina lehibe, izay no antony, raha ilaina dia zava-dehibe ny fikaroham-pitsaboana haingana hanombohana ny fitsaboana mifandraika amin'izany.
Matetika ireo dia fivontosana izay tsy misy olana ara-pahasalamana.. Ny fitanana tsiranoka malefaka dia azo alaina mora foana amin'ny fahalalana toro-hevitra vitsivitsy momba ny fanesorana ny tsiranoka.
Ahoana ny fomba fanesorana ranoka voajanahary
Ny vatana dia manana izay rehetra ilainy mba hamonoana ny tsiranoka samirery, amin'ny endrika voajanahary. Saingy mila mandray anjara ianao. Eritrereto ny hampihetsika ny vatanao alohan'ny hanandramanao ny fihinanana sakafo sy ny fitsaboana voajanahary, toy ny amin'ny tranga maro dia ampy izay.
Ny zavatra tsotra toy ny mandeha dia mety ampy hisorohana ny fananganana tsiranoka. Amin'ny ankapobeny, ny karazana fanatanjahan-tena atao tsy tapaka dia manampy amin'ny fitazonana ny rafitra fandevonan-kanina. Misy fihetsika kely amin'ny andronao isan'andro izay mety hitarika anao amin'izany lalana izany koa, toy ny fampiasana tohatra fa tsy ny ascenseur.
Misotroa rano bebe kokoa
Mifanohitra amin'izany fa ny fisotro rano bebe kokoa dia matetika no asongadina ho iray amin'ireo lakilen'ny tsy fanangonana rano. Ka raha mijaly amin'ity olana ity ianao, tsara raha manontany tena ianao raha misotro rano ampy mandritra ny andro.
Atsangano ny tongotrao
Ny fametrahana ny tongotrao mandritra ny fotoana fohy isan'andro dia heverina ho manana tombony lehibe. Iray amin'izany ny fanafoanana ny rano, indrindra ireo tsiranoka voangona ao amin'ny faritra ambany. Ity fanazaran-tena ity dia azo atao amin'ny alàlan'ny fametahana ny ranjonao amin'ny rindrina na amin'ny fihazonana azy ireo amin'ny rivotra.
Ahoana ny famongorana ny rano amin'ny sakafo
Ahena ny sira
Ny fampihenana ny fihinananao sira no tetikady mahazatra indrindra hanafoanana ny tsiranoka. Ny antony dia ny sakafo be sôdiôma dia mety hahatonga ny vatana hitazona rano. Araka ny fikarohana dia miankina amin'ny tsirairay ny fahombiazana, na izany na tsy izany dia tsy hevitra ratsy mihitsy ny mifehy ny fihinanana sira. Ny fihenan'ny sakafo voahodina dia teboka fanombohana lehibe.
Makà magnesium bebe kokoa
Ny fampitomboana ny fihinanana maneziôma dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fihazonana tsiranoka ho an'ireo vehivavy manana soritr'aretina mialoha ny fotoana. Izy io dia mineraly tena lehibe, izay mandray anjara amin'ny fizotrany an-jatony mitazona ny vatana. Afaka hitanao amin'ny voanjo, voamaina feno, sôkôla mainty na legioma maintso. Izy io koa dia azo alaina ho famenon-tsakafo.
Makà vitamina B6 bebe kokoa
Toy ny maneziôma, ny vitamina B6 dia naseho mba hampihenana ny fihazonana ny tsiranoka amin'ny vehivavy voan'ny soritr'aretina mialoha ny fiterahana. Afaka mahita an'io otrikaina io ianao, ka tena ilaina amin'ny vatana, amin'ny akondro, ovy ary legnuts, ary koa amin'ny hena.
Makà potasioma bebe kokoa
Ny potasioma dia tsy isalasalana fa mahafantatra ny fomba hanesorana tsara ny tsiranoka. Mifandray amin'ny fahasalaman'ny fo, ity mineraly ity dia mampihena ny haavon'ny sodium raha mampitombo ny fivoahan'ny urine. Ny akondro no sakafo manankarena potasioma be mpitia indrindra, saingy misy loharano maro hafa, toy ny betiravy, epinara na voasary.
Halaviro ny gliosida voadio
Ny gliosida voadio dia miteraka andiana dingana izay mitarika amin'ny fitomboan'ny habetsaky ny tsiranoka ao amin'ny vatana. Ny siramamy latabatra dia ohatra iray amin'ny gliosida voadio, ary koa ny lafarinina fotsy, sy izay sakafo vita aminy.
Ahoana ny fomba fanesorana ranon-javamaniry
Dandelion dia iray amin'ireo diuretika voajanahary be mpampiasa indrindra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Tsotra ny asany: ity zavamaniry ity dia mahatonga anao hanihika matetika kokoa, izay afaka mampihena ny fihazonana tsiranoka. Azonao atao ny mahita an'io zavamaniry io miaraka amin'ny fananana mandoaka na amin'ny kapsula na amin'ny sachet hanomanana infusions.
Zavamaniry iray hafa misy effets diuretic izay mendrika hodinihina dia soavaly soavaly Ny fandraisana azy io dia mety mahasoa amin'ny fitsaboana ny tsy fihinanan'ny urinary sy ny aretin-tsaina..
Ny dite fennel dia manana tombontsoa ara-pahasalamana marobe, ao anatin'izany ny fanafoanana ny rano sy ny fihenan'ny fivontosan'ny kibo. Ny voa fennel dia hita ao amin'ny fivarotana sakafo ara-pahasalamana amin'ny fampisehoana eo anelanelan'ny 30 sy 100 grama.
Fanazavana voajanahary bebe kokoa
Ireto manaraka ireto dia fanafody voajanahary hafa izay matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana hiadiana amin'ny fihazonana ny tsiranoka:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Fomba fanalana tsiranoka
Sakafo 13 andro
Mihena ve ny voankazo sa mihabe lanja amin'ny alina?